किन बढ्दै छ बालविवाह ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २५, २०७६ राधिका सापकोटा
कानुनले विवाहको उमेरलाई २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पूरा नभई गरिएको विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । बालविवाह कानुन विपरीत हो र यो कार्य गरेबापत सजाय र जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले देशभरि नै बालविवाह एउटा ठूलो बहसको विषय बनिरहेको छ । केही हप्ताअघि मात्र विवाह गर्न पाउने उमेर १६ वर्ष बनाउनुपर्छ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । केही समयअघि सांसदले संसदमा नै छोरीहरूको विवाह १६ वर्षमा गर्न पाउनुपर्छ नत्र भने विकृति फैलिन्छ भनी बोलेका कुरा पनि बाहिर आए । कतिपयको तर्क छ– अहिलेको बच्चाहरूको विकास चाँडो हुन्छ । त्यसैले २० वर्षको उमेरको हदबन्दी धेरै भयो । पहिला पहिला पो बाबुआमाले विवाह गरिदिन्थे । अहिले त आफैं भागेर विवाह गर्छन् । अब हामीले के गर्न सक्छौं र ? हो, अहिले यस्तैयस्तै विषयले समुदायदेखि सहरसम्म, सडकदेखि संसदसम्म चर्चा पाइरहेको छ । प्रदेशहरूले पनि बालविवाह विरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । ३ नं प्रदेशले २०७८ सालसम्म बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्य प्रदेशले पनि ‘छोरीको विवाह होइन पढाउँ, बेटी बचाउँ, बेटी पढाउँ’ जस्ता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । सबैको एउटै उद्देश्य सानो उमेरमा विवाह गर्ने कुरालाई रोक्ने, छोरीहरूको शिक्षा पूर्ण गर्ने र सक्षम, सबल सशक्त बनाउने नै देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि किन बढिरहेको छ त सानो उमेरमा विवाह ? आमाबाबुले गर्दिने विवाह भन्दा पनि आफैंले गर्ने विवाह झन् किन बढ्दो छ ? यसको जरासम्म पुग्न जरुरी छ नत्र भने हामी बालविवाहविरुद्ध कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौं । मैले सानो उमेरमा विवाह गरेका ५ जोडीसँग छलफल गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । उनीहरूसँग कुरा गर्दा र धेरै विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्दा प्राय:बाट एउटै खालको समस्या आएका छन् । ७/८ कक्षामा पढ्ने केटालाई केटी र केटीलाई केटा मन पर्न थाल्छ । उनीहरू एकआपसमा नजिकिन थाल्छन् । त्यसपछि साथीहरूको बीचमा हल्ला हुन थाल्छ । फलाना र फलानाको ‘लभ’ परेको छ । ब्ल्याकबोर्ड, स्कुलका भित्ताहरूमा उनीहरूको पहिलो नामको अक्षरहरू जोडेर लेख्न थालिन्छ । विस्तारै यो कुरा शिक्षकहरूकोमा पुग्छ । शिक्षकहरूले बोलाएर उनीहरूलाई गाली गर्न थाल्छन् । उनीहरूलाई अनुशासनहीन भएको आरोपमा सजायँ दिइन्छ र नबोल्न भनिन्छ । त्यसपछि यही कुरा अभिभावककोमा पुग्छ । त्यसपछि उनीहरू कति जनाको त विद्यालय आउने कुरासमेत रोकिन्छ । उनीहरूले गाली, पिटाइसमेत खानुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अनि आफूलाई माया गर्ने एकजना मात्र भएको महसुस उनीहरूले गर्छन् । आफूलाई मन परेको र माया गर्ने मान्छेसँगै बस्ने एउटै उपाय भनेको विवाह भएको निष्कर्ष निकालेर भाग्ने गर्छन् । अधिकांश जोडीसँग कुरा गर्दा यही नै कथा उनीहरूले भने । यी सबैको स्वाभाविक कारण भनेको उनीहरूको उमेरजन्य मनोवैज्ञानिक कारण हो, जसलाई उचित परामर्श दिन नसक्दा बालविवाह जस्तो दूरगामी असरका घटना भइरहेका छन् ।
अहिले हामी इन्टरनेटको दुनियाँमा छौं । फेसबुक नचलाउने प्राय: कोही छैन । मोबाइल सबैको हातमा छ । हामी एउटा कुनामा बसेर संसार हेरिरहेका छौं तर हाम्रो सोच आजभन्दा २० वर्षअघि जस्तो थियो त्यसमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । आज पनि विद्यालयमा केटा र केटीलाई अलगअलग बेन्चमा राखिन्छ । किन भनेर सोध्यो भने उनीहरू बिग्रन्छन्, पढाइमा ध्यान दिँदैनन् भन्ने जवाफ पाइन्छ । अहिले पनि विवाह र ‘सेक्स’लाई जोडेर हामी हेरिरहेका छौं । ‘सेक्स’ हुनलाई विवाह हुनुपर्छ वा केही गरी ‘सेक्स’ भइहाल्यो भने त्यही व्यक्तिसँग विवाह गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । ‘सेक्स’का बारेमा कुरा गर्नु, छलफल गर्नुलाई इज्जतसँग जोडिन्छ । १२/१३ वर्ष पुगेपछि केटाले केटी मन पराउनु स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो तर यो हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले अप्राकृतिक बनाइदियौं । यसलाई बन्द कुरा र इज्जत विरुद्धको कुरा बनाइदियौं । त्यसैले धेरै किशोरकिशोरी आफूले ठूलो अपराध गरेको सम्झेर आत्महत्यासमेत गर्न पुग्छन् । हामीले कहिलै केटालाई केटी मन पर्नु र केटीलाई केटा मन पर्नु स्वाभाविक हो भनेर बच्चाहरूलाई सिकाएनौं । तिमीलाई मन पर्‍यो भने माया गर, बोल, कुरा गर केही बिग्रिँदैन तर विवाह उमेर नपुगी, आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने नभई नगर भनेर कहिलै सिकाएनौं । खालि उनीहरूलाई डर, त्रास र मन पराउनु गलत हो भन्ने मात्र सिकायौं । बालविवाहबाट हुने असरबारे सिकाएनौं । परिणामस्वरूप बालबालिकाहरूले सानै उमेरमा विवाह गरिरहेका छन् ।
जबसम्म हामी किशोरकिशोरीहरूसँग खुलेर ‘सेक्स’को कुरा गर्दैनौं, उनीहरूलाई ‘सेक्स’ र विवाह फरक हो र यो एकअर्काको पर्याय होइन भनेर सिकाउन सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म बालविवाहको अन्त्य सम्भव छैन । एकजना ८ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षको बालिका गर्भवती भएको ६ महिनामा मात्रै घटना बाहिर आयो । हामीले बालिकालाई किन समयमा नभनेको गर्भपतन गर्न मिल्थ्यो भनी सोध्दा उनले आफ्नो गर्भमा बच्चा आएको वा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको बताइन् । साँच्चै हामी कहाँ कुरा गर्छौं त ? न परिवारमा यस्ता विषयमा कुरा हुन्छ न विद्यालयमा नै । अब हामीले किशोरीहरूलाई महिनावारी भइसकेपछि शारीरिक सम्बन्ध भयो भने तिम्रो गर्भ रहन सक्छ भन्ने सिकाउन जरुरी छ । कसरी सुरक्षित सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका कुरा, गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थाका कुरा हामीले गर्न जरुरी छ । हामीले इज्जतका कुरा गरेर, लाजका कुरा गरेर अब समस्या समाधान हुनेवाला छैन । अब उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सूचना दिने र सचेत बनाउने काम गर्न जरुरी छ ।
कुनै बालबालिकाले अहिले कसैलाई मन पराउँछ भने त्यसमा किन हामी अवरोध गरिरहेका छौं ? हामीले उसलाई माया गर्न दिने, मन पराउन दिने, सँगै हाँस्न, खेल्न, बोल्न दिने तर उनीहरूलाई सुरक्षित हुन चाहिने सूचना पूर्ण रूपमा दिने हो भने केही बिग्रँदैन । आज उसले मन पराएको मान्छे भोलि उसको परिपक्वतासँगै परिवर्तन हुन सक्छ । परिवर्तन भएन भने पनि उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेर यही नै सही निर्णय हो भन्ने सोच्छन् भने किन आपत्ति गर्नुपर्‍यो ? हाम्रो इज्जतका लागि, अनुशासनको नाममा आज हामी थुप्रै बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइरहेका छौं । १७ वर्षमा विवाह गर्ने १८ वर्षमा बच्चा जन्माउने र २० वर्ष हुँदानहुँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका थुप्रै किशोरकिशोरी हाम्रासामु छन् । हामीले विवाह र ‘सेक्स’लाई जोडिदिएका कारण सानै उमेरमा विवाह गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:०९
आश्विन २५, २०७६ भोजराज पौडेल
काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ कुनै बेला प्रदेश प्रशासक थिए । त्यतिबेला उनलाई एकपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको थियो, ‘तपाईं आफ्नै कामको मूल्यांकन गर्दा १०० दिनुहुन्छ कि नब्बे ?’
जवाफमा सीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि दिन्नँ । १०० दिँदा धेरै घमण्ड देखिन्छ । नब्बे दिँदा गिर्दो आत्मसम्मान झल्किन्छ ।’
सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् जन्मेर शासन गर्ने यिनै पहिलो नेता/राष्ट्रपति सी चिनफिङले शनिबारदेखि गर्ने राजकीय भ्रमण नेपालका लागि गर्वको विषय बनेको छ ।
‘लाल राजकुमार’को रूपमा सन् १९५३ मा जन्मेका सीले पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका आफ्ना पिता सी झोउसनबाट राजनीतिक दीक्षा पाए पनि उनको झोंगनानहाई (चीनको ह्वाइट हाउस) तर्फको यात्रा सहज रहेन ।
१९७४ जनवरीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण रूपमा सदस्य बनेसँगै गाउँ सचिव भएका सीको पार्टी प्रवेशको आवेदन सातौं पटकसम्म अस्वीकार भएको थियो । अन्त्यमा एक स्थानीय नेताको सहयोगमा उनले सदस्यता पाउन सके । उनको यो निर्णयलाई उनका समकक्षी र साथीहरूले स्वागत गरेनन् । बरु धोकाको रूपमा बुझे । त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिअन्तर्गत माओले सम्पूर्ण घरानियाँ परिवारका शिक्षित युवालाई चरम दु:ख दिइरहेको समय थियो जुन १९६८ को डिसेम्बरमा ‘रेड गार्डस्’ परिचालन गरेर सुरु भएको थियो ।
१९६२ मा सीका बाबुलाई माओले दुत्कारेको उपन्यास मन पराएको आरोप लगाई एक कारखानामा काम गर्न पठाइयो । आमा ची सिनलाई खेतीपातीमा खटाइयो । १९६७ मा माओले विद्यार्थीलाई ‘वर्गीय शत्रु’ लाई निसाना बनाउन निर्देशन दिए । यही समयमा सीका बाबुलाई पूर्वी जर्मनी भ्रमणका क्रममा बाइनाकुलरमार्फत पश्चिम जर्मनीतर्फ हेरेको थप आरोपसमेत लगाएर सैनिक हिरासतमा राखियो । यो समयमा आधिकारिक रूपमा ‘रेड गार्डस्’ मा भर्ती हुन सी सानै थिए । उनका बाबुका कारण पनि उनलाई मन पराइएन । त्यस समयमा आफूलाई चार पटकसम्म थुनामा राखिएको र आफ्ना बाबुको निन्दा गर्न बाध्य पारिएको सन् २००० मा उनले बताएका छन् ।
त्यस समयको एक घटनालाई उनले यसरी सम्झेका छन् :
‘म १४ वर्षको थिएँ । एक रेड गार्डस्ले मलाई सोधे, ‘तिमी स्वयंलाई आफ्ना गल्ती कति गम्भीर लाग्छ ?’ मैले प्रतिप्रश्न गरें, ‘तपाईं आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । के ती मलाई फाँसी दिन पर्याप्त छन् त ?’ मैले सय पटक झुन्ड्याउन पर्याप्त भएको जवाफ पाएँ । मैले सोचें एकपटक झुन्ड्याइनु र सय पटक झुन्ड्याइनुमा कुनै फरक छैन भने सय पटकसँग किन डराउनु ? मैले पत्तो पाइसकेको थिएँ उनीहरू केवल मलाई तर्साउन आएका थिए । तर उनीहरूले मलाई अब जीवनका जम्मा ५ मिनेट मात्र बाँकी रहेको र त्यो समयमा जनताको प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादको आनन्द लिन सुझाए । अन्त्यमा हरेक दिन अध्यक्ष माओका भनाइहरू वाचन गर्न आदेश दिएर छाडे ।’
सन् १९७५ को वसन्त ऋतुको समयमा सीका बाबुलाई १६ वर्षको सजायपश्चात् पुन:स्थापित गरिएको थियो । सोही समयमा सी चिंगुवा विश्वविद्यालयमा मजदुर किसान सिपाहीको हैसियतमा केमिकल इन्जिनियरिङ पढ्न भर्ना भए । चिंगुवामा सीले प्रयोग गरेको छात्रवासको कोठालाई अहिले विशेष रूपमा सुरक्षित गरेर राखिएको छ । विश्वविद्यालय आफैंमा ख्यातिप्राप्त प्राज्ञिक थलोका रूपमा उदाएको छ ।
त्यतिबेला सीलाई शैक्षिकभन्दा पनि राजनीतिक योग्यताका आधारमा भर्ना गरिएको थियो । यही समयमा सी परिवारको पुनर्मिलन भयो । सीका बाबुले आफू अध्यक्ष माओप्रति बफादार रहेको भनी पार्टीमा पुन: जिम्मेवारीका लागि तत्कालीन प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । झन्डै दुई दशकसम्म छिन्नभिन्न हुँदा पनि सी परिवारले पार्टीप्रतिको भरोसा कायम राखेको तथ्यलाई ध्यान दिने हो भने हामीले सीको संघर्ष बुझ्न सक्छौं ।
समकालीन नेपाललाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेका सबैजसो नेताको जीवन संघर्षपूर्ण छ । तर उनीहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना वरिपरिका मान्छेका निम्न सोच र नाजायज महत्त्वाकांक्षालाई ध्यान दिँदा राष्ट्र विकासमा बाधा पुगेको देख्दैनन् । विगतको दु:खपूर्ण समयलाई बिर्सेजस्तो छनक दिन्छन् । शक्तिराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी राजनीतिको रहस्यलाई भिन्न तरिकाले व्याख्या गर्छन् । एक पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘सत्ता र शक्तिबाट टाढा रहेका र यसको कम अनुभव भएकाहरूले राजनीतिलाई एक रहस्यमय उपन्यासका रूपमा बुझ्छन् । तर म सत्ता र शक्तिसँगै आउने ताली, फूलमाला तथा वैभवलाई सतही चिजका रूपमा हेर्छु । बरु मानव सम्बन्धको चञ्चलतामा भरपर्ने राजनीतिले ल्याउन सक्ने कारावास तथा निर्वासनमा ध्यान दिन्छु । राजनीतिलाई मैले गहिरोसँग बुझेको छु ।’
सी चीनको यानान प्रान्तलाई आफ्नो जीवनको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जहाँ उनले सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा आफ्नो किशोरावस्था बिताएका थिए । ‘मैले जीवनका आधारभूत मान्यता तथा सोचहरू यानानमा आर्जन गरें जो आज मेरा गुण बनेर रहेका छन्’, सीले भनेका छन् ।
अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभेन रड भन्छन्, ‘सी चिनफिङलाई बुझ्न उनको पार्टीप्रतिको अविच्छिन्न लगावलाई ध्यान दिनुपर्छ । किनकि यही पार्टीभित्र नै उनले आफ्नो जीवनका सबैभन्दा उत्कृष्ट र निकृष्ट दिनहरू बिताएका छन् ।’
सन् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गर्दा चीनले भर्खरै मात्र आर्थिक विकासको लय समातेको थियो । चीनका सुधारवादी नेता देङ सियाओपिङले अवलम्बन गरेको अर्थ–राजनीतिक नीतिअन्तर्गत चीन विकासको पथमा बढिरहेको थियो भने नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो । अमेरिकाको साम्राज्यवाद र उदारवादी व्यवस्थाको संसारभर जयजयकार चलिरहेको थियो । सोभियत संघको पतनपछि दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले एक इतिहासको अन्त्य भएको हुन सक्ने दाबी प्रश्नवाचक चिह्न राखेर गरेको जम्मा ४ वर्ष बितेको थियो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको सहयोगमा उदारवादउन्मुख संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा थिए । जियाङ जेमिन आफैंमा पार्टी तथा मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने सोचमा थिएनन् । उनको नेपाल भ्रमण दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धमा एक कडीका रूपमा रहे पनि यसका धेरै दूरगामी प्रभाव थिएनन् र रहेनन् ।
एक्काइसौं शताब्दीको प्रवेशसँगै चीनले एतिहासिक फड्को मारेको छ । सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवका रूपमा उदाएका सी नियमित प्रकारका नेताभन्दा फरक छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ दिशातर्फ धकेल्दै छन् । उनले चीनलाई विश्व व्यवस्थाको प्रमुख संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै छन् ।
सोभियत संघको पतनबाट चीनले गहिरो पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थामा सीको महासचिवमा पदस्थापना पनि रहस्यमय छ । तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव हिलारी क्लिन्टनसँग सेप्टेम्बर ४ मा भेटवार्ता गर्ने तय गरेका सी अकस्मात् गायब भए । त्यसको ११ दिनपछि सेप्टेम्बर १५ मा पदबहाली गरेका सीले पछि आफूलाई पिठ्युँमा चोट लागेकाले आराम गरेर बसेको बताए । तर विश्लेषकहरू भने सीले सो समयमा पार्टीको सर्वोच्च पदका लागि आफूबाहेक अर्को व्यक्ति भएको भए खोजेर निकाल्न पार्टी उच्च पदस्थलाई चुनौती दिएर हिँडेको बताउने गरेका छन् ।
विश्व इतिहासमा चीनको स्थानलाई पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्यसाथ ‘चिनियाँ सपना’लाई अगाडि सारेका सीको नेपाल भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महत्त्व राख्छ । दुई भीमकाय मुलुकका बीचमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिकी अध्येता लियो ई. रोजले ‘अस्तित्व रणनीति’का रूपमा अर्थ्याएका छन् । तर जसले जसरी अर्थ्याए पनि खासमा यो धेरै भारतमुखी रहिआएको थियो । चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि राजनीतिक रूपमा असंलग्न रहन्थ्यो । तर बदलिँदो आवश्यकता र बाध्यताबीच अहिले चिनियाँ पक्ष पनि नेपालको राजनीतिमा जोडिन थालेको छ । सी भ्रमणलाई यसैको निरन्तरता तथा अग्रगमनका रूपमा हेर्ने हो भने आउँदा दिनमा नेपालले स्पष्ट छिमेक नीति तय नगरी धर पाउने छैन ।
चीनको छिमेकीका रूपमा नेपालले के कति फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने कुरा मुलुकले आगामी दिनमा तय गर्ने वैदेशिक नीतिभन्दा पनि यसले अवलम्बन गर्ने घरेलु राजनीतिमा भर पर्छ । चीनका लागि भने संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक नेपालको वैदेशिक नीतिले धेरै महत्त्व राख्नेछ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा जति महत्त्व राख्छ त्योभन्दा धेरै गुणा महत्त्व आधुनिक नेपालको आर्थिक विकासमा राख्नेछ । दुई तिहाइको वामपन्थी दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अन्यायपूर्ण अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न साथ खोज्दा सहज बनिदिएको चीनका पनि आफ्नै चुनौती छन् । भविष्यमा दुई देशबीच गरिने सहकार्यमा नेपालले ती बाध्यतालाई गहिराइसम्म बुझेर सोहीअनुरूप परिपक्वता देखाउन सक्छ भन्ने विश्वास भएर नै सीको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । यसलाई नेपाली नेतृत्वले पनि पक्कै मनन गरेको हुनुपर्छ । भलै यो सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गर्न र जनताका समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको भाइचारा तथा सहकार्यको सम्झौतालाई कसीका रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईतर्फी जिम्मेवारीबाट थिचिएको छ । एक, चीनको यात्रामा साथ दिने । दोस्रो, पहिलो जिम्मेवारी पूरा गर्नकै लागि भए पनि मुलुकभित्र आफ्नो मताधार तथा जनाधारलाई कायम राख्नुपर्ने छ । संविधानको पालना गर्दै निरन्तर शासन गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आवधिक निर्वाचनमा जनताको मत जित्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक समृद्धिका आम अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको समृद्धितर्फको यात्रा त्यति सहज छैन । मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कम छ । निर्यातजन्य वस्तुको कमी छ । अर्थतन्त्रबाट विप्रेषणको मात्रा निकालिदिने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ । ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सीप तथा लगानीको अभाव छ । नेपालका आर्थिक समस्या टड्कारो हुँदा पनि चीनले लगानी गर्नुपूर्व क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई ध्यान दिनेछ । यसोगर्दा नेपालले यथेष्ट रूपमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सक्ने छैन । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले यदि यो क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलनलाई नयाँ बिन्दुमा पुर्‍याउन सक्यो र नेपालले रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना निर्माणमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सक्यो भने गणतन्त्र नेपाल आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ । तबमात्र नेपालले आफ्ना परराष्ट्र नीतिलाई निर्भयसाथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । त्यो चीनका लागि पनि फलदायी हुनेछ ।
लेखक चिंगुवा विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ ०८:०७